Izinqolobane Zokulala Nesidlo sasekuseni - IntoKildare
Ngokuthinta okuningi okwenzelwe wena, insizakalo enhle nokwamukelwa okufudumele, ama-B & B ayisisekelo esihle sohambo lwakho oluya eKildare.
Siyayithanda i-B & B e-Ireland - kunokuthile okukhethekile ngokuhlangenwe nakho kokuhlala endlini yangasese, enakekelwa umninikhaya onobungane. Noma uhlala ubusuku obubodwa nje, noma wenza umbhede nesidlo sasekuseni ikhaya lakho isonto lonke, vuka embhedeni onethezekile futhi ujabulele isidlo sasekuseni esimnandi sase-Ireland ngaphambi kokuphuma usuku ozozihlola.
isabelomali Ukunethezeka I-Pet Friendly Umndeni Friendly Amahhotela e-Spa Amachibi okubhukuda Izinkundla Zomshado Izinqaba Nezindlu Zomlando
I-B & B ethola umklomelo etholakala endaweni yobuhle basemaphandleni epulazini elisebenzayo.
Indawo yokuhlala yokuziphilisa ethokomele egcekeni elibuyisiwe, okuyingxenye yeBelan House Estate eyaziwa futhi enhle kakhulu.
Indlu yepulazi iBlackrath
Indawo yokuhlala yendabuko neyokudla kwasekuseni esifundeni esihle futhi esingaketshiwe seBallitore quaker Village.
I-Bray House iyindlu enhle epulazini yekhulu le-19 ebekwe emapulazini avundile aseKildare, ibanga eli-1 ukusuka eDublin.
ICastleviewview Farm B&B
Ihora nje ukusuka eDublin, eCastleviewview Farm B&B ukunambitheka kwangempela kwempilo epulazini lobisi lase-Ireland elisenkabeni ye-County Kildare.
Umbhede nebhulakufesi ebanzi epulazini elisebenza ngamahektare angama-180 elinemibono emihle kakhulu yezwe lasendaweni.
IGreese View House
Inhloso eyakhiwe ngezinkanyezi ezi-4 zokulala & kwasekuseni ezibekiwe enhliziyweni yenye yezindawo ezinhle kakhulu e-Ireland.
Umndeni ugijimisa umbhede nesidlo sasekuseni enkabeni yeNaas, uvumela ukufinyelela kalula kuzo zonke izinsiza ezisendaweni.
IMoate Lodge Bed & Breakfast iyindlu yasepulazini yaseGeorgia eneminyaka engama-250 emaphandleni aseKildare.